musha nyika dzakabatana Vatambi veBasketball Shaquille O'Neal Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Kutanga kuenda, anotumidzwa zita remadunhurirwa rekuti “Shaq“. Chinyorwa chedu chinokupa kuzara kuzere kwaShaquille O'Neal Yehucheche Nyaya, Hupenyu, Hupenyu hwemhuri, Vabereki, Hupenyu hwepakutanga, Mararamiro, Hupenyu hwePamoyo uye zvimwe zviitiko zvinozivikanwa kubva paakange ari mudiki kusvika paakatanga kufarirwa.
Ehe, munhu wese anoziva izvozvo iye anoonekwa semumwe wevatambi vakuru kuve akambotamba muNational Basketball Association (NBA). Zvisinei, vashoma chete ndivo vanofunga Shaquille O'Neal's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Shaquille O'Neal Nyaya Yemwana:
Imwe Yekutanga yeShaquille O'Neal Yevacheche Mifananidzo.
Aimbove mutambi weBasketball weAmerican Shaquille Rashaun O'Neal akazvarwa pazuva re6th raKurume 1972 kuvabereki vake; amai vake Lucille O'Neal, uye baba, Joseph Toney muNewark, New Jersey. Vabereki vaShaquille O'Neal vakamuita semwana wavo wega. Heano amai vake vakanaka, Lucille.
Shaquille O'Neal Kwakavambwa Kwemhuri Nenhoroondo:
Nyika yeAmerica ane chizvarwa chakanangana nemhuri yake yemhuri mavambo anobva kumhuri yepakati-yemhuri kumashure. Kunyange zvakadaro, ganda rake dema rinoratidzira chokwadi chekuti mhuri yaShaquille O'Neal ndeyedzinza reAfrica -America.
Shaquille O'Neal Upenyu Hwokutanga:
Kukura semukomana mudiki, O'Neal akasangana nedambudziko risingawanzoitika. Waizviziva here?… Mumwe wevabereki vaShaquille O'Neal- kunyanya baba vake vaaifanirwa kutarisa kumusoro kuti vatambure nekupindwa muropa nezvinodhaka. Nekuda kwekupindwa muropa nezvinodhaka, baba vaO'Neal havana hanya zvishoma nemukomana wavo mudiki uye vakapedzisira vasungwa- nguva inosuruvarisa yemhuri yeO'Neal.
Paakaburitswa mutirongo, Toney haana kunetsekana kutora basa rake rekuva baba muhupenyu hwemwanakomana wake. Izvi zvakamutungamira kuti arege kodzero yake yemubereki kuna baba vokurera vaOnes, Philip A. Harrison, sajeni muHondo. Chiitiko chose chakasiya mucherechedzo kuna O'Neal murombo uyo akasara akaparadzaniswa nababa vake chaivo pamusoro pemakore.
Waizviziva here?… Hwecheche hune O'Neal hauna kukanganiswa zvachose nekusungwa kwababa vake, nekuda kweVakomana neVasikana Vekirabhu yeAmerica. Iye anorumbidza vakomana nevasikana kirabhu yeAmerica muNewark nekumuchengetedza kubva mumugwagwa nekumupa nzvimbo yekutamba. Chikurukuru, kumuita kuti afare.
Shaquille O'Neal hudiki hwakanga husiri hwega, nekuda kweVakomana neVasikana Kirabhu yeAmerica.
Biography Chokwadi- O'Neal's Dzidzo & Basa Kuvaka:
Achigara nababa vake vokurera, O'Neal aifanira kuenda kunzvimbo yemasoja yaive kuGerman uye akazotamira kunogara kuTexas. Ndichiri kugara muTexas, vabereki vaShaquille O'Neal (amai nababa-nhanho-baba) vakamunyorera kunodzidza kuRobert C. Cole High School muSan Antonio, Texas. Akakurudzirwa nekufarira kwake kwakasimba mubasketball, O'Neal akapinda timu yake yechikoro chebhasikiti.
Dzidzo yaShaquille O'Neal- Akapedza kudzidza kubva kuna Robert C. Cole High Chikoro muSan Antonio, Texas.
Paaive kuchikoro, kuita kwake mu basketball kwakamuunza mukuzivikanwa kwakasarudzika, zvakamuwanira rombo rekutungamira timu yake munhoroondo makumi masere nemasere pamakore maviri.
Vabereki vaShaquille O'Neal pavakamuendesa kuchikoro chepamusoro, mukomana wechidiki akagwinyawo. Waizviziva here?… O'Neal akaitawo budiriro huru mukati memazuva ake epamusoro Chikoro chepamusoro nekutungamira timu yake kuhwina mukwikwi wenyika. Kusvika parinhasi, rekodhi yake inoramba yakanyorwa mune zvinyorwa zvengano apo iye achiisa rekodhi yemakumi manomwe neshanu rebound muchikamu cha791. Tarisa mufananidzo waShaquille O'Neal achiri kuchikoro chesekondari.
Kuita kwake hakuzombokanganwika muNhoroondo yeCole High School basketball timu.
Iyo Biography Chokwadi- Makore Ekutanga neBasketball:
Zvinowanzo taurwa kuti, kana ukadzingirira kugona, kubudirira kunokutevera. Iyi huzivi hwakave hwaro hwehupenyu hwepakutanga hwaO'Neal. Kubudirira kwake mumutambo webhasikiti paakapedza chikoro chesekondari kwaive kusingaenzanisike. Panguva iyo vabereki vaShaquille O'Neal vakafananidza kunyoresa kwake kuLouisana State University, mukomana mudiki anga atovhara chibvumirano nechikwata cheYunivhesiti chebhasikiti icho chinodanwa zita "Browns".
O'Neal akatamba koreji basketball kuLouisiana State University.
Zvekutanga Basa Rekuita: Ndichiri kutamba maBrown kuLSU mugore ra1991, O'Neal akahwina iyo Adolph Rupp Trophy seNCAA yevarume bhasiketi mutambi wegore. Iye zvakare akagashira kuzivikanwa kwakawanda kusanganisira iye koreji mutambi wegore panguva yake yekutanga basa kuBrown.
Iyo Biography Chokwadi- O'Neal Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Nhoroondo haizombokanganwa kutaura nezve O'Neal hunyanzvi uye kuenderana mubasketball sezvo iye nekukurumidza akaendeswa muLSU Horo yeMukurumbira mushure mekunge asiya timu mukutsvaga rake rehunyanzvi basa muNBA.
O'Neal akanyorwa neOrlando Magic pamwe neyekutanga sarudzo mu 1 NBA dhizaini. Kunyangwe iwe hunhu hwake hwakamupa iye wekutanga sarudzo, akanzwa kuti achiri kuda kuzviratidza kuti asimbise nzvimbo yake muchikwata chake chitsva. Chokwadi ndechekuti, kutarisira kukuru kwevazhinji mafeni kwakapisirwa nekuvapo kwake.
O'Neal's Basa Zvipingamupinyi:
Panguva iyoyo, O'Neal aifanirwa kushandisa iyo jeresi nhamba 32 mukirabhu yake nyowani nekuda kwekuti Terry Catledge akaramba kuisiya jezi nhamba 33 kwaari. Waizviziva here?… O'Neal akakuvara mumwaka wa1995-96, chiitiko chakamutadzisa kutamba mitambo makumi maviri nemasere mumwaka iwoyo.
Iyo yaimbove basketball nyanzvi yakatambura zvakanyanya kukuvara parwendo rwake kuenda mukurumbira.
Zvichida, zvaizofarirawo iwe kuziva kuti aimbove webasketball prodigy akatambura zvakare nekumwe kukuvara kubva kutanga kwebasa rake rebhasikiti rehupfumi.
Iyo Biography Chokwadi- O'Neal's Rise kune Mukurumbira Nyaya:
Kukwira kwaOnal kumukurumbira kunogona kufananidzwa nekumhanya kweroketi repadenga sezvaakaita kuita kunoshamisa muvhiki rake rekutanga rekuonekwa muNBA, chiitiko chakamupa iye mutambi wevhiki. Mushure memakore mana achitamba Orlando Magic, O'Neal akazova muridzi akasununguka uye munguva pfupi akasaina kondirakiti yemakore manomwe, $ 121 mamirioni neLos Angeles Lakers mugore ra1996. Ikoko akasangana ndokuumba mubatanidzwa unotyisa nekunonoka. Kobe Bryant.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora iyi bio, O'Neal anoremekedzwa seimwe yeakanyanya basketball prodigies muNBA. Mibairo yake yakawanda humbowo hwekuita kwake kunoshamisa mumutambo we basketball.
Waizviziva here?… O'Neal ndiye akatanga rookie kuvhoterwa All-Star Starter kubvira Michael Jordan mugore ra 1985. Unyanzvi hwake husingaenzaniswi hwebhasiketi ndakamuona achinyatsoita muzvikwata zvakasiyana kubva pamazuva ake erookie kusvika pazuva rekuenda kwake muna 2011. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Iyo Biography Chokwadi- O'Neal's Hupenyu hwehukama:
Hupenyu hwehukama hwaO'Neal hunokatyamadza sezvo anga achibatanidzwa muhukama hwakawanda hwekudanana nevasiri pasi pevakadzi vasere.
Ndivanaani Shaquille O'Neal's Ex-Vasikana Shamwari:
Kare ikako, seyakagadziriswa bhasiketi basketball inoisa chinzvimbo chakasimba pachigamba, nenzira iyi anova nechokwadi chekuchengetedza hupenyu hwerunyararo.
Waizviziva here?… Maererano ne NdianiDatesWho webhusaiti, Shaquille O'Neal akambotaura; Arnetta Yardbourgh (1995-1996), Karrine Steffans (2004-2005), Dominica Westling (2007-2010), Nicole Alexander (2010-2013), Laticia Rolle (2014), Annie Llonzeh (2019).
Shaquille O'Neal ndiani's Mukadzi ?:
Pakati pehukama hwake hwakawanda, O'Neal akatora danho rakashinga rekusunga pfumo nemukadzi wake aimbova mukadzi Shaunie O'Neal.
Shaquille O'Neal's Ex-Wife- Sangana naShaunie O'Neal.
Akanga afambidzana naShaunie kwemakore mana kubvira 1998 vasati varoora yavo yakaitwa pazuva re26th yaDecember 2002. Mushure mekunakidzwa makore manomwe emuchato, O'Neal nemukadzi wake aimbova mukadzi vakarambana nekuda kwezvikonzero zvavanozivikanwa kwavari pa9th. zuva raNovember 2010.
Shaquille O'Neal Chokwadi Chemhuri:
Hupenyu hwemhuri hwaO'Neal panguva yehudiki hwake hwakazadzwa nekuodzwa mwoyo sezvo baba vake vekubereka vasina kumupa kutarisirwa kwaaida. Nekudaro, baba vake vekubereka vakapinda mukati kuti vazadzise basa remhuri raaishuvira nekudaro vachimupa ruzivo rwehupenyu hwe mhuri. Muchikamu chino, tichakupa rumwe ruzivo nezve hupenyu hwemhuri hwaShaquille O'Neal.
About Shaquille O'Neal's Amai:
Lucille O'Neal ndiamai vaShaquille O'Neal. Akave amai vachiri kuyaruka apo O'Neal akazvarwa muna 1972. Waizviziva here?… Lucille akatsungirira urombo, kuramba, kushungurudzwa, kupindwa muropa uye kurwara kwemwana wake zvakadaro, haana kumbokanda mapfumo pasi paari uye haana kukanda mwanakomana wake.
Makore akati gare gare, akazoroora Phillip abva kuna Joseph uye ave nevamwe vana. Akatsigira vana vake muhupenyu hwavo hwese hwekudzidza uye akadzoka kuzodzidza mushure memakumi emakore mashoma. Vane chikwereti cheVakomana neVasikana Club kure kumashure muNewark, Lucille nemwanakomana wake vakapika kuenderera mberi nekutsigira Kirabhu mukutenda nerunyararo rwavaive vafarira kubva kuClub pazera rake nyoro.
About Shaquille O'Neal's Baba:
Joseph Toney ndibaba vaShaquille O'Neal vekubereka. Waizviziva here?… Akasungwa nekuda kwekushandisa zvinodhaka apo O'Neal achiri mudiki. Kukundikana kwake kutora basa rake rababa muhupenyu hwaOnal kwakakonzera kusawirirana pakati pavo.
Mune imwe yemaOnnal's 1994 maalbamu, O'Neal akataura kunzwa kwake kwehasha uye kuzvidza baba vake avo vasina kana hanya kuziva kuti aive ari kuita sei mushure mekuburitswa mutirongo. Kunyangwe O'Neal asina kusimbisa kutaurirana kusingagumi nababa vake vekubereka kubva paakakwira mukurumbira, asi nekutenda, akazivisa kuna baba vake mu2016 kuti haamuvenge.
About Shaquille O'Neal's Vatezvara-baba:
Phillip A Harrison (akatumidzwa zita Phil) ndiye baba vaShaquille O'Neal-baba. Akatora basa rababa kubva kuna baba vaOnal uye ave nechokwadi chekuti O'Neal anowana kurapwa kwababa kwaanofanirwa.
Phillip aive sajeni wemauto haazombokanganwikwa nemhare nyanzvi basketball. Paaitaura nababa vake chaivo, O'Neal akaombera Phillip nekuda kwehupenyu hwakanaka hwaakange anako. Akati;
“Handikuvenge. Ndakave nehupenyu hwakanaka. Ndakanga ndiina Phil. ”
About Shaquille O'Neal's Vanun'una:
Shaquille O'Neal ane hanzvadzi mbiri pamwe nehama. O'Neal kazhinji anowirirana nevanun'una vake vatatu uye pazviitiko zvakawanda, anotandara navo uye akatovadzidzisa kushambira. Akarasikirwa neimwe yehanzvadzi dzake, Ayesha Harrison Jex kumaoko anotonhora erufu mushure mekurwa nekenza. Iye achiri kutsigira vanun'una vake vaviri vasara; Jamal naLateefah O'Neal.
About Shaquille O'Neal's Vana:
Hupenyu hwemhuri hwaShaquille O'Neal haugone kunyorwa pasina kutaura nezvevana vake. Ukama hwake naArnetta Yardbourgh hwakapa kuberekwa kwemwana wake wekutanga Taahirah pazuva re18th raJuly 1996.
Vasati varoora mu2002, hukama hwepedyo hwaO'Neal naShaunie hwakabereka vana vaviri vanoti; Shareef Rashaun naAmirah Sanaa. Pasina chinguva mushure mekuchata kwavo, shiri dzerudo dzakaramba dzichienderera mberi nekuzvara nekudaro dzichizadza Shaquir Rashaun naMeara Sanaa.
About Shaquille O'Neal's Hama:
Chekupedzisira, pahupenyu hwemhuri hwaShaquille O'Neal, tinokuudza zvakawanda nezvehama dzake. Ambuya vaamai vaShaquille O'Neal vaive Odessa Perry Chambers, mwanasikana waJohnnie Perry naWillie S. Ucier. Zvakare, sekuru vake amai vake vaive Sirlester O'Neal, mwanakomana waHilton O'Neal naScillar Wright. Hapana ruzivo rwakawanda rwunozivikanwa nezvevamwe vemhuri yemhuri yaShaquille O'Neal kunyanya sekuru nasekuru vababa vake pamwe nasekuru vake, babamunini, babamunini, uye babamunini.
Shaquille O'Neal Hupenyu Hwega:
Chii chinoita kuti Shaquille O'Neal afare?… Gara kumashure apo isu tichikupa iwe ruzivo nezve hupenyu hwega hweVeteran basketball prodigy. Kutanga, O'Neal's persona isanganiswa yePieces zodiac maitiro.
Shaquille O'Neal aratidzira hunhu hunoenderana nehunhu hwake hwezodhiac. Iye akazvarwa mutungamiri, aine akawedzera-akajairwa kutyaira uye kutsunga. Ane simba-rinoda kugona kwemanzwiro uye kunzwira vanhu tsitsi. Zvido zveO'Neal uye zvinokuvaraidza zviri kukwira midhudhudhu uye kunanga kupfura.
Waizviziva here?… Shaquille O'Neal uye LeBron James vakatora Yoga makirasi. Hongu! Iwe wakazvinzwa izvo. Izvo zvisingafungidzike nezve kuti sei 7 tsoka, 1 inch kureba O'Neal inorema 325 mapaundi angadai akafunga mukutora Yoga kirasi. O'Neal akatora kirasi yake yekutanga kuCleveland Yoga muBearwood nemuridzi Tami Schneider uyo akarumbidza zvaakaita. Kupesana nemaonero aTami, O'Neal akataura kuti:
“Ini ndini mudzidzi weyoga akaipisisa munhoroondo yegaga”
Shaquille O'Neal Lifestyle:
Shaquille O'Neal ane huwandu hunofungidzirwa hwemadhora mazana mana emadhora panguva yekunyora. Kwayakafuma hupfumi hwake kunonyanya kubva pakuedza kwake basketball uye kutsigira kunoenderana nemhando dzakadai seAventis 'Icy Hot pain-zororo chigamba, VitaminWater, Burger King, Pepsi, uye Taco Bell. Kuongororwa kwemashandisiro ake maitiro kunoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha hwakanyatso kukodzera muyero wake.
Shaquille O'Neal's zvinhu: Nyeredzi yakatorwa pamudhara bhasiketi yakazviwanira imwe mari yakawanda. Ane mamirioni akawanda emadhora dzimbahwe dzakapararira dzakatenderedza US uye muna 2019, anoisa imwe yedzimba dzakanaka muFlorida kutengeswa kwemari yeanopping yemadhora makumi matatu emamirioni.
O'Neal zvakare ane muunganidzwa wemota dzepamusoro dzinoti; Ferrari 355 Spider, Rolls Royce Phantom, Buick Lacrosse, Yakatambanudzwa Lamborghini Gallardo, Inoshandurwa Dodge Challenger, Ford Bronco II, Yakasarudzika 2001 Chevrolet G1500, Dodge Challenger Hellcat, Yakagadzirirwa Sprinter Mercedes van, uye Mercedes Smart Car.
Shaquille O'Neal Chokwadi (Untold):
Kuputira yedu yaShaquille O'Neal's biography, hezvino zvimwe zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi izvo zvinokubatsira iwe kuti utore mufananidzo uzere nezvake.
Chokwadi #1: Chii chinonzi Chitendero chaShaquille O'Neal?:
Shaquille O'Neal muMuslim, mumwe munhu anofunga zvakanyanya nezve chitendero chake. Waizviziva here?… Zita rake rekutanga nepakati - Shaquille naRashaun - zvinoreva “Mudiki” uye "Warrior" muchiArabic zvichiteerana. O'Neal akataura kuti anotenda muna Mwari uye akarumbidza Mwari nekubudirira kwake kwese uye kubudirira kusvika zvino. Ndichiri muMuslim, vabereki vaShaquille O'Neal vane mazita echiKristu.
Chokwadi # 2: Mumhanzi uye Bhaisikopo Basa:
Iyo yaimbove nyeredzi yeAmerican NBA yaisangoitirwa bhasikiti chete asi yaivewo neimwe dhiraivha yemimhanzi uye mafirimu. Mimhanzi yake inoedza inosanganisira; mana maAlbum maalbhamu, maviri ekuunganidza maalbhamu, maviri manzwi, imwe isina kuburitswa album uye mapfumbamwe singles. O'Neal akaratidzirawo mumafirimu akati wandei uye zviriko zvinoratidza uye akaita zvakanyatsonaka mune rese basa raakapihwa.
Chokwadi # 3: Paakamira Kunwa Doro:
Vabereki vaShaquille O'Neal vakambomuranga kare kuti anwe. Waizviziva here?… Akasiya doro kubva pamazuva ake ekuyaruka apo sajeni vake baba vake vakamubata iye nehama yake ne12-pack yedoro uye haana kuvaratidza tsitsi. Senge panguva yekunyora, haaputi kana kunwa doro. Achiyeuka zvaakaona nababa vake vokurera, O'Neal akati:
"Aive akaomarara patiri, uye izvozvi sezvo ini ndakura, zvinoita sekunge ndakadzidza kuHarvard kuti ndobudirira sei, uye ini ndaisatombozviziva."
Chokwadi # 4: Zvinoreva Shaquille O'Neal's Tattoos:
Shaquille O'Neal akaisa inki akati wandei wetatoo pamuviri wake. Chinonyanya kuzivikanwa neinki yake ndeimwe yemanyepo ake - Diesel - iyo yakatemwa nyora paruoko rwake rweruboshwe pamusoro peiyo nyora yaanofarira - tsamba "S" yemunhu mukuru inomirira mweya wake usingafi.
Shaquille O'Neal Wiki:
Pekupedzisira pane yedu Shaquille O'Neal Yehucheche Nyaya uye Biography Chokwadi, isu tinokupa yake wiki ruzivo. Tafura iri pazasi ichakubatsira iwe kuti uwane ruzivo nezvake nenzira yakapfupika uye yakapusa.
Zita rizere: Shaquille Rashaun "Shaq" O'Neal.
Mazita emazita: Shaq (Mukuru).
Zuva uye Nzvimbo yekuzvarwa: March 6, 1972 (age 48)
Vabereki: Phillip A. Harrison (baba vekurera), Joseph Toney (baba) naLucille O'Neal (Amai).
Vanun'una: Ayesha O'Neal (hanzvadzi), Jamal O'Neal (mukoma) naLateefah O'Neal (hanzvadzi).
Mukadzi: Shaunie O'Neal (2002 kusvika 2011)
Vana: Shareef O'Neal (mwanakomana), Shaqir O'Neal (mwanakomana), Me'arah O'Neal (mwanasikana), Amirah O'Neal (mwanasikana) uye Taahirah O'Neal (mwanasikana).
Dzidzo: Robert G. Cole Junior-Senior High Chikoro.
Basa: Retirement nyanzvi yeAmerica basketball mutambi. Iye zvino muongorori wemitambo.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Shaquille O'Neal Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!